My freedom: Sunday Routine
စိတ်ထဲမှာ စာမရေးတာ ကြာလှပြီလိုပဲ။ ဒိုင်ယာရီပိုစ့်မရေးတာကြာလို့လည်း ပါမယ်။ အခုဆို ည(၁၀)နာရီခွဲတော့မယ်။ ဒီအချိန်ကျမှပဲ စာရေးနိုင်တော့တယ်။ တနင်္ဂနွေမနက်စာကို ပဲပြုတ်နဲ့ထမင်း ကြော်စားရတာ ကြိုက်တယ်။ ကြားရက်ဆို အဲ့လိုတွေမလုပ်နိုင်တော့ ပေါင်မုန့်နဲ့ပဲ နှစ်ပါးသွားရတာကိုးး...
တနင်္ဂနွေလေးတစ်ရက် အလုပ်မသွားရဘူးဆိုပေမယ့် အိမ်အလုပ်တွေက တန်းစီနေတယ်။ သူများတွေရော အဲ့လိုတွေရှုပ်လားသိချင်လို့ ကန်ဒီလုပ်တာတွေ ပြောပြမယ်နော်။ မနက်(၉)နာရီလောက် အိပ်ယာထရင် မနက်စာအတွက် ထမင်းကြော်ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုလုပ်တယ်။ ကြက်သားဟင်းချက်မယ်ဆို ကြက်သားကိုဆားနဲ့နယ်ပြီး နှပ်ထားတယ်။ အဲ့ဒါပြီးရင် သွားတိုက်မျက်နှာသစ်ပြီး ဘုရားပန်းအိုးလဲတယ်။ အရင်ကဆို အဲ့ဒါပြီးရင် ကန်ဒီ့ဟမ်းစတားလေးတွေအိမ်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတယ်။ ခုတော့ သူတို့မရှိတော့တော့ အဲ့တစ်ခုလုပ်စရာ မလိုတော့ဘူး (သူတို့ကို သတိရတယ် >.<)။ မနက်စာကို စိမ်ပြေနပြေစားပြီးရင် ဟင်းစ,ချက်တယ်။ ဟင်းချက်လို့ပြီးရင် ကွန်ပျူတာလေးခဏကြည့်ပြီး နေ့လည်စာစားတယ်။ ပြီးတော့ သောကြာနေ့ကလျှော်ထားတဲ့အ၀တ်တွေကို မီးပူတိုက်တယ်။ အချိန်လေးနည်းနည်းရရင် ဘလော့ဂ်ရေးတယ်။ အဲ့ဒါပြီးရင် ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားဖို့ ရေချိုးပြင်ဆင်တယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွား စာသင်ပြီးပြန်လာရင် ချက်ထားတဲ့ဟင်းတွေသိမ်းဆည်းပြီးမှ ကုတင်ပေါ်လှဲနိုင်တယ်။ ဒါကန်ဒီ့ အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေလုပ်နေကျအလုပ်တွေ။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နှစ်ရက်ပိတ်တဲ့လူတွေကို အားကျတယ် >.<
ကန်ဒီအပြင်ကပြန်လာရင် သူ့ကိုတခါတလေတွေ့တတ်တယ်။ တွေ့တယ်ဆိုတာနဲ့ လူပေါ်တတ်ပြီး ချွဲတော့တာပဲ။ သူနဲ့ (၅)မိနစ်လောက်ထိုင်ပြီးမှ အိမ်ပေါ်တက်တယ်။ ဟမ်းစတားလေးတွေ မရှိတော့ သူတို့ကိုပဲ ချစ်နေရတယ်။ ကန်ဒီ့အမောပြေလေးတွေ...
လူစွံမစွံတော့ မသိဘူး... မျက်စိတော့ စွံလိုက်သေးတယ်။ ဒါက ပြန်ကောင်းသွားတဲ့ မျက်လုံး (xD)။ သင်္ကြန်ရောက်တော့မယ်နော်။ ဒီနှစ်တော့ ပင်ပန်းလို့ မက,တော့ဘူးလို့ စဉ်းစားထားပေမယ့် မရပါဘူး။ သင်္ကြန်ပိုးနဲ့ က,ဖို့အတင်းခေါ်တာနဲ့ ပေါင်းလိုက်တော့ က,ဖြစ်သွားတယ်။ ခုဆို အက,တွေ တိုက်နေရပြီ။ တိုပါးရိုးသင်္ကြန်က April 12 ဆိုတော့ သိပ်မလိုတော့ဘူးလေ။ နှစ်ပုဒ် (သို့) သုံးပုဒ်လောက် က,ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ က,မယ့်က,တော့လည်း စင်ပေါ်က ကန်ချမခံရရုံတမယ် ဟဟဟ xD
အလုပ်ကပြန်ရင် အက,သွားတိုက်ရတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် အရမ်းပင်ပန်းတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ည(၁၀)နာရီ ထိုးနေပြီ။ သင်္ကြန်မတိုင်ခင် (၃)ပတ်လောက်ကတော့ ဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်နေဦးမှာပဲ။ သင်္ကြန်ဆိုလို့ မနှစ်ကသင်္ကြန်ပုံလေး အမှတ်တရ ပြန်တင်လိုက်ဦးမယ်။
Posted by Candy at 11:32 PM
နန်းတို့တော့ သင်္ကြန်မှာ မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး မယ်သီလရှင်ဝတ်ဖြစ်မယ်ကန်ဒီလေးရေ...။ အသက်တွေလဲမငယ်တော့ဘူးဆိုတော့ သင်္ကြန်ပိုးတွေကို အပြတ်အသတ် နှိမ်နှင်းရမယ်။း)
We are old, you are young.
We r young, u r old.
U-n-'We r both young.
U-n-We r both old.
U-n- We r neither young nor old.
These r only because of
' Selection = Exclusion ' principle of nature ??? GGPa.